ရွှေဘိုသား: သာမန် လူလိုတွေး ခေါ်ခြင်း (၁)
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Thursday, October 25, 2007 /
i agree with u at all and
hope everybody see like that
and wish can make to free from those situations..
good job, bro. it's great, really great. I amachildhood-fan of Che Guevara too.
စကားဝိုင်းတခု ဖြစ်တည်ဖို့ ...
အားလုံးကို ပေးလိုက်ရမယ် ဆိုရင်တော့...
အရှုံးပေး လိုက်လျောရတာပဲ ဖြစ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်..
တကယ့်မျှတတဲ့ စကားဝိုင်းကို ရောက်ဖို့...
တော်လှန်တဲ့ အသက်သွေးတွေနဲ့ ရင်းရတာပါပဲ...
အခု သူတို့ဆွဲတဲ့ ဥပဒေကို လက်ခံမှဆိုရင် ဒီဥပဒေက တပ်မတော်ရဲ့ ၂၅ % ကို လက်ခံလိုက်ရင်..
ဒီဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ ဘယ်တော့မှ လုပ်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေက ဘယ်နိုင်ငံကိုမှပုံတူကူးမရသလို...
ကိုယ့်ပြည်အရေးကို ကိုယ့်နိုင်ငံသားတိုင်းက စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ ဟန်ချက်ညီလုပ်ကြဖို့လိုပါတယ်..
အဓိက ဘယ်သူ့ကိုမှ အားကိုးလို့ ရမယ်လို့ မမြင်တာက
အားလုံးရင်ထဲမှာ ရှိနေသိနေပြီး ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်..
တနေ့ကို ရောက်ဖို့ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်က စလုပ်ကြရမှာပေါ့လေ...
very good post , pls keep on,i always support to u